Fedora 18 Kuisa Nongedzo Nhanho-nhanho | Kubva kuLinux
Fedora 18 Nhanho-nhanho Kuisa Nongedzo
Nenguva ino tinokuunzira mutungamiri we kuisirwa yezvitsva Fedora 18, kugovera kunotsigirwa ne Red Hat izvo hazvisiye chero munhu asina hanya.
Usati waisa Fedora 18, unofanira kutevedzera nhanho nhatu idzi:
Download iyo Fedora ISO mufananidzo. Pane iyo Fedora peji, iwe uchafanirwa kusarudza iyo yekuvaka uye desktop nharaunda yesarudzo yako. Kana iwe usingazive kuti izvi ndezvei, ndinokurudzira kuti uverenge yedu gwara pane zvakagoverwa, yesumo.
Gadzira iyo BIOS kuitira kuti ibhuye kubva kuCD / DVD kana kubva pendrive, zvinoenderana nezvawakasarudza padanho rapfuura.
Iyo bootloader ichaonekwa. Sarudza Kutanga Fedora 18. Mushure mekutanga iyo system, iyo skrini yekupinda ichaonekwa. Sarudza sarudzo Rarama Sisitimu Mushandisi.
Kana uchinge wapinda mukati, tinya pane iyo icon Isa kuHard Drive:
Pachiratidziro chinotevera iwe unozogona kugadzirisa zuva uye nguva, iyo keyboard uye yekuparadzanisa scheme yeiyo hard disk. Kuti uite kudaro, ingotinya pane yega yesarudzo idzi. Kugadziriswa kwayo kuri nyore, kunze kwekuparadzanisa diski, iyo yatinozoona zvakadzama.
Dzvanya pane hard drive kwaunoda kuisa iyo system uye tinya pane bhatani Enderera. Kana iwe uchida kuinyora, kuti uwane kuchengetedzeka kukuru, sarudza sarudzo Encrypt yangu data. Iyi sarudzo inongokurudzirwa muzviitiko zvekudikanwa kwakanyanya, sezvo mhedzisiro yekuita mhedzisiro isina kukodzera.
Iyo disk yekuparadzanisa wizard ichatanga.
Panguva ino, pane maviri sarudzo:
a) bvisa yekare sisitimu yekushandisa uye isa. Iyi ndiyo sarudzo iri nyore: bvisa zvese nekuisa pamusoro. Hapana chikonzero chekupisa musoro wako nezve kupatsanura diski kana chero chinhu chakadai. Mune iyo nyowani Fedora 18 yekuisa wizard, iyi sarudzo inonzi Kumbira nzvimbo.
Maitiro ekutevera mune ino nhanho ndeye kungosarudza zvikamu zvaunoda kudzima, sarudza Bvisa uye ipapo Kumbira nzvimbo.
b) kupatsanura dhisiki nemaoko. Iyi nhanho inosarudzika. Izvo zvinokurudzirwa chete kune vepakati kana vemberi vashandisi vanoziva kuti izvi zvinorevei. Chero danho risiri iro rinogona kukonzera kurasikirwa kwedata pane diski. Kana iwe usiri kuda kuzviisa panjodzi, usazviita. Kana iwe uchida kuenderera zvakadaro, sarudza sarudzo Chikamu chegadziriro. Anaconda anozopa zano rekuti "rakanakisa", asi zvinokwanisika kuchishandura nekusarudza sarudzo Ini handidi rubatsiro, rega ndigadzirise iyo diski yekuparadzanisa.
Mune yekupedzisira nhanho, inokukumbira iwe kumisikidza password yemutungamiri.
Paunenge wapedza, iyo yekuisa sisitimu inotanga.
Kana kuiswa kwapera, iwe uchave unokwanisa kunakidzwa neyako nyowani system: Fedora 18.
Avo vanoshuvira vanogona kuwana iyo yepamutemo yekumisikidza gwaro Fedora 18 (Chirungu chete panguva ino).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Fedora 18 Nhanho-nhanho Kuisa Nongedzo
Oscar Gonzalez akadaro
Ini ndoda kuziva kuzviita kana iwe uine UEFI, iyo inofanirwa kuitsigira, asi haitenderi iyo mhenyu USB kuti itange, uye isu tinoshandisa Nhaka uye kana iwe ukaita UEFI iyo isisatange uye unofanira kusiya Nhaka ... Ini ndinoda kuti itange naEFI sezvinoita Ubuntu 13.04 inoita
Pindura kuna Oscar Gonzalez
Julian David Yepes Carreño akadaro
Chimwe chinhu uye kusahadzika kwangu fedora kuri nani pane ubuntu? Ndatenda, ndinovimba yakadzorerwa protein 😀
Pindura Julian David Yepes Carreño
Iyo yaive subliminal xD jaaaai xD
Jerome Navarro akadaro
Ndine urombo nekungonongedza chikanganiso chidiki uye kusasiya chero chinhu chinovaka kumashure. Ini ndinofunga gwara rakanaka kwazvo, nemifananidzo yedanho nhanho yakakosha kwazvo. Iyo nyaya yeviri bhutsu ine windows $ inogona kusiiwa kunze, iyo kune vashandisi vatsva inogona kunge iri nyaya yakajairika, asi kupfuura izvozvo zvingangodiwa chete kumirira «Zvekuita mushure mekuisa….» 😛
Pindura Jerónimo Navarro
Iyo Linux Mint logo inoiswa mumusoro.
Kwete chete iyo logo iyo Fedora dhawunorodha chinongedzo chinokutungamira kuLinuxmint
Pindura kune vanhu
Ndatenda tute ...
rubatsiro ini ndoda kuisa macodec eodhiyo uye vhidhiyo fedora 18
Ariel gimenez akadaro
Maita basa manje, ndakapihwa, ndiri kuenda kunotsvaga mango nekuisa lunux.
Pindura kuna Ariel Gimenez
Mhoroi, ini ndiri newbie, newbie chaizvo uye ndaifarira fedora. Ino inguva yekutanga yandiri kuzoshandisa linux. Iwe unofunga kuti fedora haisi yangu here? Ndakagara ndichishandisa windows.
Zvakanaka, ndinofunga unofanira kutanga washandisa Ubuntu, sezvo iri imwe yezvipenga zviri nyore.
Fedora 18 akadaro
Mhoro shamwari shamwari, ndaisa fedora 18 uye zvese zvakanaka kunze kwekunge ndingaite sei mavhidhiyo nemumhanzi? Inondibvunza macodecs asi isingawane zvinyorwa ... Ndingaite sei kuti ndigadzire bluetooth pasina kutadza kubatana uye kufambisa faira? .. uye pakupedzisira Ndekupi uye ndingaite sei kurodha pasi vlc? Mufaro!.
Pindura Fedora 18
Ndine dambudziko, ini ndatorodha pasi maDVD maviri, imwe kubva murukova uye imwe kubva kurodha pasi Ini ndinoshandisa iyo x86_64 vhezheni. Kekutanga nguva yandakakwanisa kuiisa zvakanaka, asi sezvo ini ndakanga ndisina fomati zvakakwana (ndakakanganwa), ndaida kuisa zvekare uye kubva ipapo uye neiyo imwe dvd kana neimwe iyo zvinondipa kukanganisa kana ndichisarudza mutauro, uye haundibvumidze kuti ndirambe, ndiko kuti pakutanga pakutanga hapana chimwe. Ini handinyatso kuziva zvakawanda nezve linux, ndakashanda pamwe ne17 nemufaro mukuru asi ikozvino handizive zvakaitika nazvo.
Kurudziro yangu: zviponese pachako dambudziko uye dzosera fedora 17 ... kana chinja kune imwe distro.
Pindura Tishandise Linux
Ndiri kuona kuti iwe wakashandisa virtualbox, unogona kundisiira kumisikidzwa kwemuchina, ndine matambudziko pandakatanga kuisa uye chokwadi ndechekuti handizive zvinoitika.
Pindura kuna RobertoISC
Sir Co $ t Granda akadaro
Haasi newbies, iye anowanzo shandisa.
Pindura Sir Co $ t Granda
Uye ko bhuti uye zvese izvo? D :, unonyatsoita izvozvo kana "zvakaoma" kuisa fedora, ndinoreva kana uchikwanisa, ndaigona, handisi kuti kwete asi iyo inosimudza inosemesa, ine zvipingamupinyi zvakawanda uye zvinoita sekuvhiringidza mushandisi neruzivo diki, asi HAPANA anogona kuisa Fedora chete, iyo chokwadi, iri OS hombe, ini ndinoifarira asi chimwe chinhu chinofanira kudzidza kubva kunaDebian kana Ubuntu nezve kutarisa pazvinhu zvidiki zvinoita kuti hupenyu hwako huve nyore, kune zvese zvimwe hapana chekuita nyunyuta uchiziva kuti yakanaka distro inotora nguva (:
haubatanidzi kubva tor? 😛
Eddy juarez akadaro
Ndinoda rubatsiro rwako!
Ini ndinoedza kuisa Fedora kubva pendrive, asi painotanga haina kundipa sarudzo yekutanga se "Live System User". Chii ichi? Chero mhinduro kune izvi?
Kwaziso kune vose.
Pindura Eddy Juárez
Mhoroi, ini ndoda rubatsiro rwako, ndinoda kugadzirisa patsva dhirairi rangu, ndiko kuti, kupatsanurwa kuri kuita fedora iyi, ini ndoda kuikurisa, mazano---
Pindura kuna Isaac
mushandisi mutsva akadaro
Mushure mekuisirwa, Fedora inotakura chaiyo repo? EPEL kana imwe, kana inowirirana nema centos kana Redhat repo, ndiko kuti, anogona kuzorora here kushandiswa kunze kwe fedora Epel?
Pindura kumushandisi mutsva
Uchishandisa iyo webhurawuza seye online Notepad
Consort: Iyo nyowani Desktop Nharaunda yeSolusOS inoberekwa